ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် Coronavirus ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမည်သို့လျော့ချမည်နည်း Gadget သတင်း
Ignacio Sala | | applications များ, လဲ tutorial
Coronavirus သည်ဥရောပ၊ တရုတ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများရှိအခြားနိုင်ငံများအားလုံးနီးပါးကို ၂ လကြာလေဖြတ်ခဲ့သည်။ စီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးသည်တစ်ညလုံးရပ်တန့်သွားသည်။ ပုံမှန်အဆင့်သို့ပြန်သွားရန်အဆင့်အမျိုးမျိုးကိုကျော်လွှားပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေကြသည်.
စီးပွားရေးအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးဝေးကွာခြင်း၊ မျက်နှာဖုံးများအသုံးပြုခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်အကန့်အသတ်များကဲ့သို့သောကန့်သတ်ချက်များစွာကိုလိုက်နာရမည်။ သူတို့သည်ခေါင်းရှိလက်သည်းများဖြစ်နိုင်သည် နှစ်လလှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲလုပ်ကိုင်ပြီးနောက်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အလွတ်တန်းများအတွက်
အများစုသည်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အလွတ်တန်းများဖြစ်ကြပြီး၎င်းကိုတတ်နိုင်ရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေရန်ကြိုးစားနေကြသည် စီးပွားရေးကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထားပါဖြစ်နိုင်သမျှပိုက်ဆံနည်းနည်းဖြင့်ဆုံးရှုံးရန်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်များကိုလာမည့်လများအတွင်းမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားပါ။ coronavirus ဖြစ်ပေါ်စေသောအကျပ်အတည်းကိုကျော်လွှားရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည့်နည်းလမ်းအချို့ကိုသင်သိလိုပါကဆက်လက်ဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏စိတ်ကိုမကျော်လွှားနိုင်သောအတွေးအခေါ်များစွာကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
သင်ဤဆောင်းပါးသည်ဤအမျိုးအစားအင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့နိုင်သည်ထက်ပိုမိုသောဆောင်းပါးဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်သိသင့်သည်မှာကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထိုပြthoseနာများကိုယခုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအရာများ ငါတို့ကြိုးစားရန်ရှိသည် တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအဖြေတစ်ခုရှာပါ။
1 ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှု applications များ
3 မူလစာမျက်နှာ မှစ. လုပ်ငန်းခွင်
3.2 Virtual အစည်းအဝေးများ
ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှု applications များ
အခွန်နှင့်အလုပ်သမားအတိုင်ပင်ခံများကလစာ၊ ငွေတောင်းခံလွှာများ၊ အခွန်အခများ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီပမာဏနှင့် ၀ န်ထမ်းအရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ လစဉ်လတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပေး၏ငွေတောင်းခံလွှာဖြစ်နိုင်သည် ငါတို့မဖုံးနိုင်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေထဲကတစ်ခုပါ။
ဤအခြေအနေမတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံချက်မှာ - သင့်ကုမ္ပဏီကိုမိုးတိမ်တွင်စီမံခန့်ခွဲပါ။ ၎င်းသည်ပိုမိုရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးချွေတာသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့အား ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကိုတစ်နေရာတည်းတွင်စုစည်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည် အများကြီးနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာ အရာ၏တစ် ဦး ဆက်ကပ်အပ်နှံအကြံပေးကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။
အများစုသည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန်ကြိုးစားနေသောကုမ္ပဏီများနှင့်အလွတ်များ ဆွေမျိုး အဆိုပါ coronavirus ၏ကျမ်းပိုဒ်ပြီးနောက်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အရေးကြီးဆုံးသောအချက်တစ်ခုမှာငွေပေးချေမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ရေရှည်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်မစဉ်းစားမီကျွန်ုပ်တို့ထိုင်သင့်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးသွင်းသူများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး။
Coronavirus သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူမှထွက်ခွာသွားသည့်စီးပွားရေးအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့သည်လက်ခံလိမ့်မည် ဆိုင်းငံ့ငွေတောင်းခံလွှာ၏စုဆောင်းမှုနှောင့်နှေး။ မည်သည့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်မဆိုနောက်ကျလျှင်ပင်အားသွင်းရန်မလိုတော့ကြောင်းသတိရပါ။
သိသာထင်ရှားတဲ့ငွေပေးချေမှုကိုတိုးချဲ့ဖို့ကြိုးစားမထိုင်မီ, ငါတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပေမည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း၏လည်ပတ်ငွေကြေးကျနော်တို့ဖြစ်ကောင်းဆိုင်းငံ့တောင်းဆိုနေတာတစ်ခုတည်းသောဖောက်သည်မဟုတ်သကဲ့သို့။
မူလစာမျက်နှာ မှစ. လုပ်ငန်းခွင်
အများပြည်သူရှေ့မှောက်၌ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်သောရုံးလုပ်ငန်းအများစုမှာ၊ အိမ်မှperfectlyုံပြုနိုင်သည်၀ န်ထမ်းများနှင့်အလုပ်သမားများလိုက်နာရမည့်အလုပ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားသမျှကာလပတ်လုံး။
အိမ်မှအလုပ်လုပ်ခြင်းသည်ရုံးခန်းနေရာများကိုလျှော့ချရန်ခွင့်ပြုရုံသာမကစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်သည်ပိုမိုသေးငယ်သောရုံးခန်းများကိုရှာဖွေခွင့်ပေးသည် ထို့ကြောင့်လစဉ်ငှားရမ်းခပမာဏကိုလျှော့ချပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လုပ်ငန်းရှင်အားငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုစရိတ်သို့မဟုတ်မိုင်အကွာအဝေးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Microsoft's Teams application သည်ကုမ္ပဏီများကိုအဝေးမှအလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် တစ်ဘုံနှင့်တစ် ဦး ချင်းဆက်သွယ်ရေးရုပ်သံလိုင်းတည်စေ အသုံးပြုသူများအသီးအသီးနှင့်အတူ။
မိုက်ကရိုဆော့ဖအသင်းများက ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပလက်ဖောင်း ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအခါအားလျော်စွာဖြစ်စေ၊ တစ်ကြိမ်တည်းဖြစ်စေဖြစ်စေရုံး၌နေရာချထားရန်မလိုဘဲဖြစ်စေ virtual အစည်းအဝေးများကျင်းပရန်ခွင့်ပြုသည်။
သူသည် Microsoft ၏ task application ဖြစ်သော To-Do နှင့်လက်ချင်းတွဲအလုပ်လုပ်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်စီစဉ်ဖို့ခွင့်ပြုတယ် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး စီကိုဆိုင်းငံ့ထားပြီး ၄ င်းတို့၏အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပါ။ ၎င်းသည် Office 365 နှင့်ပေါင်းစပ်။ လူအများအားအတူတူစာရွက်စာတမ်းပေါ်တွင်အတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
သော်လည်း ပျင်းရိတဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်၎င်းသည်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများနှင့် task manager နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းတို့ကိုမပြုလုပ်သောကြောင့်၎င်းသည်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုအနေဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသကဲ့သို့၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းတွင်ရှိသည့်ဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုအုပ်စုဖွဲ့ရန်မေးခွန်းဖြစ်သည်။
ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုလုပ်သည့်အခါမှန်ကန်သောရွေးချယ်နိုင်သောနံပါတ်သည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Microsoft Teams ကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ပါကထိုတူညီသော application မှဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည် အခြားဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။
အကယ်၍ ဤအရာသည်မဟုတ်ပါက Google Meet နှင့် Zoom နှစ်ခုစလုံးမှပေးထားသောရွေးချယ်မှုများသည် ၀ န်ဆောင်မှုအရေအတွက်နှင့်ပါ ၀ င်သူများအရေအတွက် (တူညီသောဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု ၁၀၀) တွင်တိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ Microsoft Teams ကဲ့သို့ application နှစ်ခုလုံးကိုမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
ငါတို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာက application ကို remote access လုပ်နိူင်မလားဆိုတာ developer ကိုမေးရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်ယခင်ကကဲ့သို့ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ဤအရာသည်မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဝေးလံခေါင်သီသောစီမံခန့်ခွဲမှုအပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးချနိုင်သည် ဘယ်နေရာမှာမဆိုဆက်သွယ်ခွင့်ပြုပါ ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံးကိုသာသုံးပါ၊ ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်စီမံခန့်ခွဲမှုအပလီကေးရှင်းသာမကပါ။ TeamViewer သည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်အပလီကေးရှင်းများကိုပေးထားသောကြောင့်ဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်ဆုံးအပြည့်အဝဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သငျသညျအစဉျအမွဲအွန်လိုင်းစတိုးဖန်တီးရန်စဉ်းစားခဲ့ကြပါ ယခုစံပြအချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုဖန်တီးရန်၊ ငွေပေးချေရန်၊ ပို့ဆောင်ရန်နည်းလမ်းများကိုခွင့်ပြုသည့်အမျိုးမျိုးသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနိုင်သောအလားအလာရှိသောပရိသတ်တိုးချဲ့ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဤသဘောမျိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင်များသောအားဖြင့်လှုပ်ရှားမှုများစွာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဖေ့စ်ဘွတ်ပလက်ဖောင်းအသစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် Facebook Stores, သောပလက်ဖောင်း အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို Facebook မှတစ်ဆင့်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချရန်ကူညီသည် ၎င်းသည်မသေချာမရေရာသည့်အချိန်များတွင်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Mark Zuckerberg ၏ကုမ္ပဏီမှကန ဦး စီစဉ်ထားသည့်အချိန်ထက်စော။ စတင်ခဲ့သည်။
ဒီပလက်ဖောင်းအရ Facebook Stores ကတဆင့်အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုဖန်တီးပါ ၎င်းသည်အလွန်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည် မတူညီသောတင်းပလိတ်များနှင့်ကိရိယာများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောပစ္စည်းများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံး၏ပုံရိပ်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်စတိုးဆိုင်ကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းရနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » applications များ » Coronavirus တစ်ခုရဲ့ကုမ္ပဏီအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ
Huawei Y6P: Huawei မှနောက်ဆုံးပေါ် "စျေးနှုန်းချိုသာမှု" ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်သည်
Yeedi2Hybrid, ဒီစမတ်စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်ကိုနက်ရှိုင်းစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု